काठमाडौं । केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले दिनभरिका महत्वपूर्ण तथा खोजमूलक ५ वटा समाचारहरूलाई केन्द्रबिन्दु समाचार बुलेटिनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यो बुलेटिन केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाको युट्युब च्यानलबाट हरेक दिन प्रसारण हुन्छ । प्रत्येक दिन खोजमुलक र समसामयिक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास हो ।आजका प्रमुख समाचार मध्ये एकल पुरुषलाई भत्ता दिने चलन सुरु भयो भने तपाईंलाई कस्तो लाग्ला ? हामीलाई जे जस्तो लागेपनि बझाङ जिल्लाको एउटा गाऊपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने ब्यवस्था गर्ने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा रहँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार सक्रिय भएका छन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाउने कानुनको उनले वकालत मात्र गरेका छैनन्, कानुन नै बनाउने कार्यमा लागेका पनि छन् । बैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुकालागि अनिवार्य जस्तै छ । तर, त्यसका बिकृतिहरुको चाँङ भने झनै बढ्दो छ । म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका ठगी उजुरीको बढोत्तरीले निराश पनि बनाउँछ । दर्शकबृन्द आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधी भोली मंगलबारवाट सकिदै । तर सरकारले आजसम्ममा पनि नयाँ आइजीपीको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन ।चीनमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर राखिने तयारी गरिएको भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र आसपासका जनतामा त्रास फैलिएको छ । सरकारले विना तयारी राख्न खोजेको भन्दै उनीहरुले जोखिमको संभावना रहेको समेत वताएका छन् ।https://youtu.be/3VEW1FuKDsY
२७ माघ २०७६, सोमबार २०:१९
आजका प्रमुख समाचार मध्ये एकल पुरुषलाई भत्ता दिने चलन सुरु भयो भने तपाईंलाई कस्तो लाग्ला ? हामीलाई जे जस्तो लागेपनि बझाङ जिल्लाको एउटा गाऊपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने ब्यवस्था गर्ने भएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा रहँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार सक्रिय भएका छन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाउने कानुनको उनले वकालत मात्र गरेका छैनन्, कानुन नै बनाउने कार्यमा लागेका पनि छन् ।
बैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुकालागि अनिवार्य जस्तै छ । तर, त्यसका बिकृतिहरुको चाँङ भने झनै बढ्दो छ । म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका ठगी उजुरीको बढोत्तरीले निराश पनि बनाउँछ ।
दर्शकबृन्द आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको पदावधी भोली मंगलबारवाट सकिदै । तर सरकारले आजसम्ममा पनि नयाँ आइजीपीको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन ।
चीनमा रहेका नेपालीलाई ल्याएर राखिने तयारी गरिएको भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र आसपासका जनतामा त्रास फैलिएको छ । सरकारले विना तयारी राख्न खोजेको भन्दै उनीहरुले जोखिमको संभावना रहेको समेत वताएका छन् ।
Prevकाेराेना स‌ंक्रमित उपचारका लागि ३६ अस्पतालमा १ सय ४७ बेडहरू तयारी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र आगलागी (फोटोफिचर)Next